Sharciga cusub ee codbixinta ee Iowa ayaa wajahaya loolan sharci | KWIT
Sharciga cusub ee codbixinta ee Iowa ayaa wajahaya loolan sharci
By Halima Osman • Mar 9, 2021
Sharciga cusub ee codbixinta ee Iowa ayaa wajahaya loolan sharci.
Badhasaabka Kim Reynolds ayaa shalay saxeexay sharciga uu jamhuurigu taageero. Waxay soo gaabisay waqtiga loo oggol yahay goor hore, boostada, iyo Maalinta Codbixinta codbixinta waxayna wax ka beddello badan oo dheeri ah ku sameysay hannaanka doorashada ee Iowa.
League of United Latin American Citizens of Iowa ayaa dacwada geeyay.
Qareenada ayaa ku doodaya in sharciga cusub uu yahay mid aan dastuurka waafaqsanayn.
Reynolds ayaa sheegay in sharciga cusub uu kor u qaadi doono daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka doorashooyinka.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay muujineysaa 15 kale oo Iowans ah inay u dhinteen dhibaatooyinka COVID-19 iyadoo in ka badan 500 oo tijaabooyin wanaagsan ah. Degmada Siouxland Heath ayaa ka warbixisay 22 kiis oo cusub oo ka dhacay Gobolka Woodbury 24 saac gudahood.
Dhanka kale, rug caafimaad oo tallaal ah ayaa loo abaabulay guriga bulshada ee Mary J. Treglia maalinta Arbacada ah ee soo socota, 17-ka Maarso. Lambarka la wacayo si loo diiwaan geliyo waa (712) 258-5137. Waqtiga kama dambaysta ah ee isdiiwaangelintu waa 15-ka Maarso.
Saraakiisha caafimaadka Nebraska waxay sii wadaan aqoonsiga noocyada kala duwan ee coronavirus-ka gobolka. Gobolka ayaa sheegaya in shan kiis oo kala duwanaansho ah oo markii ugu horeysay laga ogaadey Boqortooyada Midowday iyo 14 kiis oo kala duwanaansho ah oo markii ugu horeysay lagu ogaadey Kaliforniya hada la xaqiijiyey. Labada nooc ee fayraska ka mid ah waxaa la rumeysan yahay in si fudud loo kala qaado.
Magaalada Sioux City ayaa ku dhawaaqday duulimaadyo cusub oo ka imanaya garoonka diyaaradaha ee Sioux Gateway. SkyWest waxay dhawaan shaacisay inay kala wareegi doonto adeegga wareegga shirkadda American Airlines Abriil 1deeda. Shirkadda ayaa ku guuleysatay qandaraas seddex sano ah oo federaal ah si ay u bixiso Adeegga Cirka ee Muhiimka ah ee Sioux City oo ah shirkad duulimaad goboleed u ah United Airlines. Skywest horey ayey ugu adeegtay Denver. Waxaa jiri doona duulimaad subax iyo galab ah oo tagaya Chicago iyo duhur duhur oo aadaya Denver diyaarad 50-kursi fadhida.